warkii.com » Dr Marcus Rashford Oo Amaan Kala Kulmay Solskjaer Ka Dib Markii Uu Shahaadada Uga Sareysa Ka Helay Jaamacada Manchester
Dr Marcus Rashford Oo Amaan Kala Kulmay Solskjaer Ka Dib Markii Uu Shahaadada Uga Sareysa Ka Helay Jaamacada Manchester
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa amaan ugu qubeeyay Marcus Rashford ka dib markii la shaaciyay in weeraryahanka uu shahaado heer sarre ah ku helayo howshiisa samafalka.
22 jirkaan ayaa noqonaya qofkii ugu da’da yaraa ee shahaado heerka sarre ka helaya Jamaacahada Manchester iyadoo ay hore u heleen shahaadadaan Sir Alex Ferguson iyo Sir Bobby Charlton.
Rashford ayaa lagu abaalmariyay howshiisa samafalka ee uu qabtay xagaagan isagoo uruuriyay lacag gaareysa 20 milyan ginni si loogu quudiyo afar milyan caruur ah oo iskuuladii ay cuntada ka cuni jireen loo xiray sababo la xiriira Korona Fayras.
Weeraryahanka ayaa sidoo kale ku qasbay in dowlada ay ka laabato go’aankeedii hore ee ay ku joojineysay cuntada bilaashka ah ee iskuulada, isagoo ka dhaadhiciyay inay barnaamijkaas sii wadaan ilaa iyo xagaagan.
Tababarihiisa ayaana aad ugu farxay maanta in lagu abaalmariyay shahaado sharafeedka Manchester University.
“Aad ayaan ugu faaneynaa Marcus” ayuu yiri tababaraha reer Norway.
“Dhowr jeer ayaan sheegay, Marcus waa shaqsi weyn, waa bani’aadam fiican. Dadka kale ayuu ka hormariyaa naftiisa, shaqada uu qabtay ayaa muujineysa inuu dadka kale ka walwalo.
“Aad ayaan ugu faanayaa isaga, waxaan rajeynayaa inuu shaqasiyadaan sii lahaado inta ka harsan noloshiisa, sidaasa sii ahow.”
Isagoo ka hadlayay shahaado sharafta la gudoonsiinayo, Rashford ayaa yiri: “Maalin weyn ayay ii tahay aniga iyo qoyskeyga. Marka aad eegto magacyada waa weyn ee shahaadadaan la gudoonsiiyay waxay kaa dhigeysaa mid madaxa raariciya.
“Weli ma dhamaanin dagaalkii aan kula jirnay saboolnimada caruurta ee wadankaan laakiin inaan aqoonsi ka helo magaaladeyda waxay la micno tahay inaan wadada saxda ah ku socoto, wax weyn ayayna iila micno tahay. Waad mahadsan tihiin Jamaacada Manchester”